Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada buuxda ee xiddiga kubadda cagta ee ugu caansan magaca Nickname; "2nd Prince of Monaco '. Dabeecadda Carliga ee Kylian Mbappe iyo Xogta Aan Laheyn Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga. Kaga bilow
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Nolosha Carruurnimada Hore
Kylian Mbappé Lottin wuxuu ku dhashay Bondy, waqooyi-bari ee Paris ee 20 December December 1998 aabihiis Cameroon, Mr Wilfried Mbappe (macalin) iyo hooyada Algeria, Fayza Mbappe Lamari (ciyaaryahankii hore ee kubada gacanta). Dhalashadiisi waxay timid lix bilood ka dib markii France ay ku guuleysatay Koobka 1998 World Cup ee Stade de France kaas oo ahaa 11km oo ka yimid tuuladiisa. Iyada oo ah ilmo isku dhafan oo caruur ah oo ku dhashey qoyska ciyaaraha, hal shay ayaa u ahaa wiilka yar "Kubada cagta."
Sida laga soo xigtay aabihiis,
"Wiilkeyga Kylian waa ka weyn yahay kubada cagta - waxaan qabaa inuu yahay waali. Waxa uu ku dhawaad ​​iga dhigayaa xitaa adiguna aad ayaan u arka inaan yahay tababare kubada cagta. Wuxuu had iyo jeer ku darayaa 24 / 7. Kylian wuxuu daawanayaa wax walba. Wuxuu daawan karaa afar ama shan kulan oo isku xigta. "
Horumarinta xaafadaha Paris oo markii hore burburay rabshad iyo kacdoon kama aysan hor istaagin. Wax walba oo ku saabsan mustaqbalkiisa si wanaagsan ayuu u maamulaa qoyskiisa.
Awooda uu mudnaanta u leeyahay waqtiga ayaa muujiyay waxtarkiisa kubada cagta. Wuxuu marnaba waqti u isticmaalin dimoqraadiyad ahaan. Wuxuu sheegay inaysan jirin waxyaabo aan muhiim ahayn sida iskuulaadka oo si buuxda u socdo si loo helo waqti kubadda cagta. Haa, waqtigiisa qoyskiisa iyo asxaabtiisa ayaa ahaa mid muhiim ah, laakiin ka dib wuxuu yimid kubbada cagta iyo wax kale.
Wuxuu baranayey sida loo sii wadi lahaa iyo sida loo dhaqsiyaha badan yahay. Qalabka waxbarashada lama dhigin. Tani waxay ahayd sida uu u horumariyay ciyaarta.
Markii uu da'diisu ahayd 6, waxa loo arkaa inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee caruurta Faransiiska ah. Tani waxay ahayd waqtigii uu aqoonsaday xiriirka kubada cagta Faransiiska. Kylian waxay wax weyn ka qabatay cunuga. Marar badan ayuu saaxiibadiis ka tagay xaalad xaasidnimo leh.
Xitaa ilmo ahaan, Mbappe ayaa qaadatay awoodda lagu guuleysto. Wuxuu ahaa qalab gaar ah oo tayo leh. Ma jiro mid ka mid ah sawirka kor ku xusan sida ugu sareeya ee uu sameeyey. Qaar ka mid ah ayaa ka luntay jidkooda.
Mbappe waxa uu sawir ka qaadayaa guusha uu ku gaaray guul. Waxay ahayd maskaxdiisa iyo waxa uu aaminsan yahay ee naftiisa u qaaday isaga oo u jihaysan.
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Nolosha Qoyska
GABAAN: Aabihiis, Wilfried Mbappe waa xidigaha Cameroon iyo Nigeria waxana uu ka shaqeeyaa macalinka AS Bondy (Wakhtiga qorista). Wuxuu ahaa hal mar magangalyo oo u soo guuray Faransiiska si daaq wanaagsan leh. Mr Wilfried, oo doonaya in uu si joogta ah u dego, ayaa guursaday qof muwaadin ah oo Faransiis ah, Fayza.
Waxa uu bilaabay inuu tababarto wiilkiisii ​​kumanaan da'diisuna ahayd lix sano markii ay labada jilaa ahaayeen kuwo da 'yar.
Waa haatan wakiil kubada cagta ah wiilkiisa. Wuxuu macallin udiraa walaalkiis ka yar Adeyemi Mbappé.
HOOYO: Mbappe aabihiis maahan midka kaliya ee ku soo boodey jaceylkiisa iyo geneskiisa. Hooyadiis Fayza Mbappe waxay dhashay Fayza Lamari waa asal ahaan Algeria. Waxay ahayd ciyaaryahankii hore ee kubada gacanta.
Fayza Mbappe waa hooyada sharafta leh ee Faransiiska ciyaaro Weeraryahanka, Kylian Mbappe. Fayza Mbappe oo ah isboorti hore ayaa iska leh waa immisa shaqeeyaan si aad u sameyso xirfadle beerta. Ciyaaryahankii hore ee kubbadda gacanta ayaa soo dhaweeyay wiilkii koonfureed bishii December 20, 1998, waqooyi-bari ee Paris. Waxay daawatay isaga oo koraya a dhalinyaro yar yar ninka iyo ugu muhiimsanaa mid ka mid ah ciyaartoyda muhiimka ah ee adduunka. Waxay hadda ku nooshahay Bondy, Faransiiska.
Kylian Mbappe waa walaal walaalkiis ah Jire Kembo-Ekoko oo ka tirsan Congo. Aabaheed wuxuu ahaa ciyaaryahankii hore ee kubada cagta, saaxiibkiisa dhow ee Wilfried Mbappe oo loo yaqaan 'Zaire' ee Koobka Adduunka 1974.
Jires waxay u haajireen Faransiiska markii uu ahaa ilmo ay la joogaan Mr Wilfried Mbappe oo ugu dambeyntii noqday mas'uulka sharciga ah.
Waxa uu sanadkaan 10 ka weyn yahay da 'yarta Kylian oo da' ahaan da'diisu ay ka soo jeedo kubada cagta adduunka. Labada midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midba midka kale ayuu u yahay Wuxuu mar hore ciyaaray kubadiisa kubada cagta ee Rennes.
Brother Little: Kylian Mbappe wuxuu leeyahay walaalo yar oo magaciisu yahay Ethan oo ah 7 sano yar. Labada dhinacba waxay u arkaan inay yihiin hadiyadii ugu fiicneyd ee waalidkoodii ay ku siiyeen. Kylian Mbappe mar ay heshiis la gashay Monaco si ay u ogolaato walaalkiis inuu noqdo mascot. Tani waxay dhacday ka dib markii uu ku qanciyay Ethan inuu uciyaaro sida mascot ee Champions League.
Mbappe ayaa yiri: "Waxa uu doonayay. Waxay ahayd daqiiqad weyn. Waxa uu jebiyey madaxayga guriga. Wuxuu yiri "Ii i qaado, ii qaado", sidaa daraadeed waxaan is-idhi "OK, waan ku qaadanayaa, waan idinla ..."
Waxaa xiiso leh in la ogaado in Ethan Mbappe uu yahay sababtii iyo isha laga soo xigtey sababta Kylian u dabaaldagtay himiladiisa isaga oo ku dhajiyay gacmihiisa oo soo gudbay iyo suulka. Kylian Mbappe ayaa qirtay inay tahay waxa Ethan uu sameeyo marka uu ku garaaco FIFA Playstation.
Sida laga soo xigtay Kylian, 'Ma ahan kii i soo raacay. Waxay ahayd walaalkaa, Ethan. Waxa uu u dabaaldagay sidan oo kale markasta oo uu ixtiraamo Playstation FIFA '
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Nolosha Xiriirka
Su'aal kasta oo ku saabsan liistada qof walba waa kan ... Arag in dheeraad ah yaa saaxiibka ah ee Kylian Mbappe?
Shaki kuma jiro, wuxuu ka dhigay inuu tufaax u noqdo indhaha dad badan. Wuxuu ku jiraa xiriir kaas oo uu jecel yahay inuu noqdo qarsoodi. Dhamaadka cayaaraha qaar, Mbappé mararka qaarkood waxay keenaan oohinta gabdhaha qaarkood. Gaar ahaan garoomada baarkinka garoomada, gabdhaha badan ayaa sugaaya superhero.
Sida laga soo xigtay hooyadiis "Si aad ugu noolaato magaalada Paris ma ahan mid suurtagal ah sababtoo ah maaweelo maandooriye ah. Monaco, waa uu ka badbaado ".
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Iskuulka Iskuulka ah ee Faransiiska ee Greats
MBappé wuxuu tagay Clairefontaine. Tani waa qaran kubada cagta bartamaha iyo akadeemiyada oo ku takhasusay tababarka ciyaartoyda kubadda cagta ee Faransiiska. Wuxuu ka qalin jabiyay akadeemiyadda 2011. Wuxu ku biiraa xushmad sharaf leh oo qalinjabiyeyaal ah oo ay ka mid yihiin Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi, Hatem Ben Arfa iyo William Gallas.
Young Mbappé wuxuu caan ka ahaa Clairefontaine. Markii la weydiiyay waxa ku saabsan riyadiisa, wuxuu ka hadlay Real Madrid wuxuuna yiri: "Way wanaagsan tahay in lagu barto bisha. Sidaa daraadeed, haddii aad ku guul daraysatid, waxaad heleysaa daruuraha. "
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Kacsanaanta Fikradda
Ka dib markii uu aabihiis aamusiyay, oo ku soo gabagabeeyay digniintaas oo ah inay raadinayaan bedelka suuqa kala iibsiga bisha Janaayo haddii aysan wax bedelin, tababaraha Monaco, Leonardo Jadim ayaa go'aansaday inuu ka horimaado Montpellier. Mbappe ayaa si weyn ugu lug lahaa jidka 6-2 ee Montpellier oo aan dib u eegin.
Hwuxuu dhaliyay goolkiisii ​​ugu horeeyay ee seddexleey ee seddexleey ee bishii December ee 7-0 League Cup oo ay ka adkaadeen Rennes, bishii labaad ee 5-0 oo ku biiray Metz isla markaana u dabaaldegay bilowgii ugu horeeyay ee Champions League isagoo ku soo galay wadnaha daafaca Manchester City isagoo goolkiisii ​​ugu horeeyay dhaliyey. tartanka iyo kooxdiisii ​​2-1.
Tani waxay ahayd markii Mbappé uu ka faaiidaysto sida dhalinyaradu ugu dhakhsaha badan u soo jiidatay warbaahinta caalamka.
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Joojinta Down Offers
Xilliga 15, marka ay ardaydu fasaxaan Clairefontaine ka dib laba sano ka dib si ay ugu soo biiraan nidaamka naadiga xirfadeed, Mbappé ayaa iska diiday kooxaha kale ee Ligue 1, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool iyo Bayern Munich si ay ugu biiraan Monaco islamarkaana u wareegaan kooxda sii wadaan waxbarashadiisa.
AInkastoo Wilfried Mbappé uu isha ku hayo inuu wiilkiisa la sii joogo Monaco, hadana waxaa la siin doonaa waqti ku filan oo uu ciyaaro bisha October, labo bilood ka dib markii Monaco ay iska diiday dalabka 40m ee Manchester City, Kylian ma uusan bilaaban kulan Aabbuhu wuxuu ahaa mid caan ah, sida uu u sheegay L'Equipe:
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Jebinta Diiwaanada
Waxa uu kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay Monaco da'diisa kaliya ee 16 iyo maalmaha 347, isagoo garaacay rikoorka uu sameeyay Henry, kaasoo ahaa 17 sano iyo 14 markii uu u soo ciyaaray kooxda ka badan sanado ka hor 20.
Inkasta oo, HEnry ayaa sheegay in aysan caddaalad ahayn in ay wacaan Mbappe 'cusub Thierry Henry'. BMa jiro cid u digey digniinahiisa ... marka laga reebo kuwa jecel in loo yaqaan 'Neymar cusub'. Waa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee Monaco. Mbappe ayaa sidoo kale jabiyey rikoorkii uu ka lahaa Yurub marka loo fiiriyo goolasha goolka ama caawinta - ka hor xitaa Lionel Messi.
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Kulanka Thierry Henry
Xiligaan, Thierry Henry marnaba ma ogeyn inuu qaatay wiilka sannadka ee 5 oo uu ku tartami doono isagoo jabinaya rikoodhkiisa laba.
Sida laga soo xigtay Henry, "Waxaan la kulmay hal mar markii uu ilmo ahaa. Maanta, waa ilmo wanaagsan oo leh madax wanaagsan oo garbihiisa. Waa mid ixtiraam leh, oo aad u aamusnaan. Waa la go'aamiyaa mana walbahaariyo. Wuxuu yahay hadalka magaalada oo uu leeyahay tayo badan. Wuxuu leeyahay xirfado, goolal, caawiye. Waxa uu sameyn karaa waxa uu rabo kubada. "
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Kulanka Christiano Ronaldo
Sawirada hoose ayaa muujinaysa in gacmaha Cristiano Ronaldo gacanta loo geliyay garabka Kylian Mbappe ee garabka tababarka Real ee Valdebebas. Halkan waxa uu ahaa 13 keliya. Fursad uu kula kulmo C Ronaldo ayaa yimid ka dib casuumad Zinedine Zidane.
Mbappe, sawirka, waa cadaan wiil. Waa sawir si loo xoojiyo sanadaha qandaraaskiisa. Ronaldo dhinaca kale wuxuu u muuqdaa mid isku mid ah. Mbappe ayaa tan iyo markii uu ku soo barbaaray nin dhallinyaro ah oo qurux badan sida waqti gaaban.
Inay sawir la wadaagto Ronaldo ayaa shaki ku jiraa inuu ku raaxeysto ilmo sida Mbappe. Maanta, wuxuu sameeyay qaabkiisii ​​ugu horeeyay ee adduunka ah, waxaana laga yaabaa in loo arko inuu yahay hanjabaad Ronaldo. Maanta, wuxuu ku hanjabay qaab ciyaareedkiisii ​​iyo Ballon d'Or.
Sidoo kale, Paulo Dybala ayaa si cad u qeexay Lionel Messi inuu yahay "sanam". Waxa uu ku soo koray qaab ciyaareedka Barcelona. Horyaalka 2016 / 2017 League League, Dybala ayaa isaga baxay isaga oo ka baxay marxaladda Knockout. Waqti go'an oo ay sameeyaan. Waa murugo inaan ka fekero, lakiin maalintaan ayaa imaan doonta marka Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo aysan ciyaari doonin. Way iska tagi doonaan oo waan xasuusannaa oo keliya.
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Waxa ay dadka kale ka hadlaan
"Mbappé waa ciyaaryahan aad u wanaagsan. Haatan waa la barbardhigayaa Thierry Henry, wuxuu u ciyaaraa sidiisa oo kale. Waa uu da 'yar yahay laakiin hadii uu sii wado inuu sidaan u sii wato, wuxuu u ciyaari doonaa xulka qaranka si hubaal ah. " Bacary Sagna.
"Ma aheyn Thierry Henry xaqiiqda laakiin waa run in uu leeyahay tayo isku mid ah, mustaqbalka iyo tayada waa isku mid. Awoodda ayaa la mid ah, ka dib markii haddii uu leeyahay heer la mid ah dhiirigelinta, rabitaanka iyo sirdoonka ee Thierry uu leeyahay, iyo labada sano ee soo socota saddexda sano ayaa noo sheegi doona, ka dibna waxa uu noqon karaa mid aad u ballan qaadaya. " Arsene Wenger.
"Waxa uu yahay 18 sano jir ah iyo waxa uu sameeyo waa cajiib ah. Xaqiiqdii bilawga, waan aragnay, waxaana ogeyn inuu ahaa ciyaaryahan yar oo ka duwan kan uu kubada u taabto tusaale ahaan. Waxa uu leeyahay ciyaar leh wax gaar ah. Halkaa, wuxuu u shaqeeyaa waxyaabo badan. Waxaan rajeynayaa inuu sii wadi doono inuu naga caawiyo inaan koobab ku guuleysano. " Bernardo Silva.
"Waxa uu leeyahay tayo, waa wax aan la beenin karin. Waxa uu leeyahay awood dhab ah, waxaan dhihi doonaa wuxuu joogi doonaa Russia. " LifeBogger. "
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Bromance
Weeraryahanka Monaco ayaan xitaa dhalan markii Gianluigi Buffon, goolhayaha Juventus, ayaa loo magacaabay xulka Italy ee Koobka Adduunka ee 1998 ee France.
Mbappe, taasi waa mid ka mid ah tiro ka mid ah duruufaha uu ka tarjumi karo sharaf markii uu ku guuleysto horyaalka Monaco afar jeer. Kaliya lix gool oo Champions League ah xilli ciyaareedkii 2016 / 2017 ayaa la micno ah inuu dhaliyay goolal isku mid ah intii uu socday ka hor inta uusan 19 u ciyaarin sida Raul.
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Da'da ugu dhakhsaha badan
Marka la eego taxaddar taxadar leh, mid ka mid ah wuxuu ogaanayaa gabowga da'da yar ee wejiga kaas oo aan ku habboonayn da'diisa hadda.
Mar labaad, laalaabkii laga helay indhihiisa. Tani waxay dhamaystiraysaa bisaylkiisa iyo sirdoonkiisa.
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Lulmo Leh
Xilliga qorista, Kylian wali waxay ku nooshahay aqalka tababarka Monaco. Qorshahiisu waa inuu hoos u dhigo oo hoos u dhigo sidaas darteed weriyuhu ma helayo madaxiisa. Markuu qoyskiisu ku wareegsan yahay, wuxuu ka tagayaa xayawaanka in uu la joogo hooyadiis, aabo iyo walaal yar
Kylian weli qolkiisa wuxuu ku yaalaa xarunta tababarka. Hase yeeshee, wuxuu haysan lahaa macquul ah inuu guri ka helo barkad dabaasha ah. Laakiin taasi maaha wax. Waxa uu arkay aragtida aan loo baahneyn ee qaar ka mid ah ciyaartoyda khadka ka lumay. Si aan isaga ilaaliyo, waxaan ku qanciyay inuu sii joogo xarunta (akadeemiyada). Si kastaba ha ahaatee, mustaqbalka dhow, wuxuu rajeynayaa inuu helo meel isaga u gaar ah. Aabihiis wuxuu yiri.
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta -Lifebogger Rankings
Robert Agoosto 6, 2018 X XXX: 11 am
Kylian waxay u egtahay nin dhalinyaro ah oo aad u da 'yar oo leh madax wanaagsan oo garbihiisa. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aabihiis uu kor u kici karo si uu ugu bilaabo da'da da'da lix jirka ah. Haatan shuqulkii oo dhan waa la wada baabbi'iyey!
Detra Agoosto 7, 2018 X XXX: 8 am
Way fiican tahay in la akhriyo sheekada caruurta. Waxaa jira waxyaabo badan oo laga ogaado ciyaartoydaan soo socota iyo kuwa weyn. Waxay ahayd wax akhris wanaagsan.
Isabel Agoosto 7, 2018 X XXX: 9 am
Had iyo jeer waa arrin aad u shaqeyneyso si aad u gaarto waxa aad u baahan tahay. Mbappe waa nin fiican, waana hubaa inuu sii socdo.
Jonna Mayo Agoosto 7, 2018 X XXX: 9 am
Waalidiintu waxay door weyn ka ciyaaraan sidii loo hubin lahaa in caruurtoodu ku guuleysteen riyooyinkooda ama hibooyinkooda. Had iyo jeer way wanaagsan tahay in la taageero caruurta.
Lavonia K Agoosto 7, 2018 XXX: 6 pm
Wow, wax waliba waa sabab. Waxaan u maleynayay inay ka timid hawada inuu u dabaaldego goolashiisa isagoo gacmihiisa ka gudbay. Waxay soo baxday inay jirto sabab ka dambeysa.
Rod Silvers Agoosto 7, 2018 XXX: 6 pm
Waxaan u gudbinaa waxyaabo badan inta aynaan gaadhin. Ma fududa inaad gaarto heerka ugu sarreeya adigoon ku dhicin wakhtigaaga. Waxay kaloo qaadataa shaqo adag iyo jacayl.
Man Agoosto 7, 2018 XXX: 7 pm
Waxay ahayd mid cajiib ah oo akhrisa nooca wanaagsan ee Mbappe. Waxaan arkay kaliya maqaalkan oo aan ka waabanin inaan akhriyo. Waxaan wax badan ka bartay isaga.
Pablo Agoosto 7, 2018 XXX: 7 pm
Sida had iyo jeer, waxaa muhiim ah in aad u dulqaadato waxkasta oo aad sameyso. Waxyaabaha waaweyni waxay dhacaan markaad sugto. Ma jirto wax degdeg ah. Sidoo kale, sida uu sheegay, waa shaqo adag oo xisaabinaysa. In aad firfircoonaato wax kasta oo aad qabato.
Dominque Maiden Agoosto 7, 2018 XXX: 7 pm
Waxaa jira waxyaabo badan oo aan akhriyey, oo aan marnaba maqlin. Waxaan u maleynayay in ay ahayd sheeko gaaban, laakiin soo baxday waxaa jiray waxyaabo badan oo ka dhacay nolosha Mbappe.
Donte B. Agoosto 8, 2018 X XXX: 3 am
Mbappe waxay leedahay nolol ka duwan qoyska marka loo eego ciyaartoyda kale. Wuxuu u eg yahay joogitaanka garoonka. Hase yeeshee, wuxuu ku guulaystay wax badan oo wali rajeynaya inuu aado meel fog.
Brad Agoosto 8, 2018 X XXX: 4 am
Mbappe wax badan ayuu ku leeyahay sheekadiisa. Ma aanan ogeyn in uu la kulmay Christiano da'diisa yar. Waa uu fiican yahay wali waxaan sugeynaa inaan aragno qaab ciyaareedka isaga soo socda xilli ciyaareedka soo socda
Rose Agoosto 8, 2018 X XXX: 4 am
Tani waa meesha ugu fiican ee lagu akhriyo xaqiiqooyinka nolosha ee shakhsiyaadka waaweyn iyo sidoo kale kuwa kubadda cagta ee soo socda. Waxaan akhriyey maqaal kale, waana mid cajiib ah.
Serah Agbor Nofembar 22, 2018 XXX: 2 pm
Ku xejinta waalidka! Mbappe Waan jeclahay ciyaarahaaga, aad u firfircoon, waxaad u ordi jirtaa baaskiil, waxaan u egahay nacnac! Markii ugu horeysay ee aan arko aad ciyaareyso, waxaan arkay Thierry Henry, waxaan arkay Ronaldinho, sanamyadayda kubada cagta. Dhamaantiga ugu fiican ee kubada cagta.
ALICIA HUDSON Nofembar 26, 2018 X XXX: 7 am
Lottin Mbappe WAA MAXAY MAGAALADA MAS'UUL AH? U SHAQEYSO WAALIDIIN KA QAADASHO. MBAPPE WAXAA WAXYAABAHA AAD U BAAHAN TAHAY IYO ADMIRE HIMAAD, WAXYAABAHA LACAG LA'AAN AH EE MONEY. WAXA KA HADLAYAA AFRAAN IYO MACLUUMAADKA SOMALI, AFRIKA, ZULU IYO IM IM STILL LEARNING SIDA AAD U HESHIISI KARO FADLAN SI AAD U BAAHAN TAHAY MAGAALO
Tiwonge chauma Mee 16, 2019 At 5: 15 am
Aad baan ugu faraxsanahay inaan wax badan ka bartay isaga oo aad u jecel
Nabil Fekir Sheeko Xeeldheer Xogta Wacan ee Xogta Lahaa